PressReader - Isolezwe: 2017-11-15 - Abaphisi botshwala nomkhankaso wokuvikela abesifazane
Abaphisi botshwala nomkhankaso wokuvikela abesifazane
Isolezwe - 2017-11-15 - IZINDABA - BONISWA MOHALE
INHLANGANO ephisa utshwala eNingizimu Afrika iSAB and AB InBev Africa yethule ngokusemthethweni umkhankaso wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane onendikimba ethi #NoExcuse.
UNkk Andrea Quaye, oyiphini likamengameli wezokukhangisa kule nkampani, uthe bakhethe ukwethula umkhankaso othi #NoExcuse ngenxa yokuthi ucwaningo lwabo oluveze ukuthi eNingizimu Afrika owesifazane oyedwa kwabahlanu ulala eshayiwe yisithandwa sakhe ngosuku. Bathe lesi sibalo siphezulu kakhulu uma siqhathaniswa nokwenzeka kwamanye amazwe.
“Sikhethe ukuwethula umkhankaso wethu obizwa nge#NoExcuse ukuqwashisa isizwe ngokuhlukunyezwa kwabesifazane. Uphethwe yiCarling Black Label isebenzisana nenhlangano esiza amadoda ukuthi alethe uguquko emphakathini i-Takuwane Riime. Igama elithi Takuwane Riime lisho ukuthi masibambisane ngesiVenda,” kusho uNkk Quaye.
Uthe iCarling Black Label wutshwala obuphuzwa ngamadoda kakhulu kanti njengoba kuyiyona ehamba phambili kulo mkhankaso, bafuna ukuthi amadoda aphuze ngendlela ehlelekile futhi kube yiwona avikela abesifazane.
“Sithole ukuthi amanye amadoda ahlukumeza abesifazane, ngeqisayo ophuzweni oludakayo yingakho sifuna aphuze ngokuhlelekile,” kusho uNkk Quaye.
UDkt Matome Kganakga weSouth African National Aids Council, ophinde abe nguSihlalo weTakuwane Riime, uthe bayajabula ukuthi imikhiqizo efana noCarling Black Label ilwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane futhi bazokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi amadoda awabashayi abesifazane.
Lo mkhankaso we#NoExcuse wethulwe ngoMsombuluko, eGoli, kukhona noNgqongqoshe weZabesifazane eHhovisi likaMengameli. uNkk Susan Shabangu nothe amadoda nabesifazane kufanele balwe nokuhlukunyezwa kwabantu.
Laba baphisi botshwala bathe bazohambela amathaveni angu-10 000 ezifundazweni ezehlukene bakhulume ngokuphuza ngendlela ehlelekile nokuvikelwa kwabesifazane nezingane. Kuzoba nengxoxo ngokuhlukunyezwa kwabesifazane ngoMgqibelo bese kuthi ngeSonto kube nemashi yamadoda eKapa.